China Electronic Brinell Hardness Tester Wholesale HBE-3000A orinasa sy mpanamboatra | KAIRDA
Elektronika Brinell Hardness Tester Wholesale HBE-3000A
Elektronika Brinell Hardness Tester Wholesale HBE-3000A manangana karazana sensor izay ampiarahina amin'ny rafitra fanaraha-maso dia mihatra mba handrefesana ny lanjan'ny hamafin'ny fitaovana vy lehibe, ny metaly sy ny firaka tsy mitongilana, ny vy marokoroko, ny vy manamafy sy manalefaka, manokana ho an'ny metaly malefaka toy ny alimina madio, tin, sns.
Herin'ny fitsapana tanteraka 612.5N, 980N, 1225N, 1837.5N,
Fiarovana amin'ny lisitra famonosana
ind2.5, φ5, φ10mm Indry baolina baolina 1
Latabatra fitsapana ("V" lehibe sy kely) 1
Sokajy Tester Hardness
• Ireo sokajy fitsapana mafy
• Brinell henjana Tester
• Rockester Tester mafy
• Tester henjana Vickers
• Fitsapana ny hamafin'ny Webster
• Durometra amoron-dranomasina
Fikojakojana ny testerista
Ho fanampin'ny fitandremana manokana amin'ny fampiasana ny durometre isan-karazany, ny mpandramatra mafy, dia misy ny olana iraisana izay tokony homarihina, izay voatanisa toy izao:
1. Ny lesoka mafy: iray amin'ireo lesoka vokatry ny fiovana sy ny fivezivezena santionany fandrefesana; Ny iray hafa ateraky ny parameter hardness ivelan'ny fenitra voafaritra. Ho an'ny lesoka faharoa dia takiana block manara-penitra handaminana ny faharetana alohan'ny fandrefesana. Ho an'ny valin'ny fanitsiana ny Rockwell hardness tester, ny fahasamihafana dia ao anatin'ny ± 1.Raha ny fahasamihafana dia ao anatin'ny ± 2, ny valiny raikitra dia azo raisina. Rehefa ivelan'ny faritry ny ± 2 ny fahasamihafana dia mila ahitsy, amboarina na hamboarina nosoloina fomba fitsapana henjana hafa.
Ny ambaratonga henjana rockwell tsirairay dia manana laharam-pahamehana fampiharana ary tokony hofidiana araka ny tokony ho izy. Ohatra, rehefa avo kokoa noho ny HRB100 ny hamafiny dia tokony hampiasaina ny refy HRC amin'ny fitiliana; Rehefa ambany ny hamafin'ny HRC20 dia tokony hampiasaina ny refy HRB amin'ny fitiliana. Satria ankoatry ny faritry ny andrana voafaritra, ny hamafin'ny metatra sy ny fahatsapany metatra dia ratsy, ny lanjan'ny hamafiny dia tsy marina, tsy mety ampiasaina. Ny fomba fitsapana henjana hafa dia misy ihany koa ny fenitra fanamarinana mifanaraka amin'izany. Tsy azo ampiasaina amin'ny lafiny roa ny fenitra fandrefesana ny durometre fanamafisana satria mety tsy hitovy ny hamafin'ny lafiny mahazatra sy ny lafiny aoriana. Amin'ny ankapobeny, ny sakana mahazatra dia hahomby ao anatin'ny herintaona aorian'ny datin'ny kalibration.
2. amin'ny fanoloana ny lohany na ny ravina, tandremo ny faritra ifandraisana mba hamafana madio. Aorian'ny fanoloana, ny santionana vy dia tokony hosedraina imbetsaka amin'ny hamafin'ny famaritana mandra-pahatongan'ny sanda henjana mandritra ny indroa misesy. Ny tanjona dia ny hahatonga ny lohan'ny tsindry na ny lavarangana ary ny ampahany ifandraisan'ny milina fitiliana, mifandraisa tsara, mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny valin'ny fitsapana.
3. Aorian'ny fanitsiana ny fitsapana ny hamafin'ny fahotana, ny teboka voalohany dia tsy ampiasaina raha refesina ny hamafiny. Noho ny tahotra ny santionany sy ny fifandraisana anvil dia tsy tsara, ny sanda refesina dia tsy marina. Rehefa vita ny fitsapana voalohany ary ny hamaf Ny tester dia miasa ara-dalàna, ny santionany dia hozahan-toetra ara-dalàna ary ny lanjan'ny hamafin'ny refy dia hosoratana.
4. Rehefa avela ny santionany, farafahakeliny salan'isa henjana telo farafaharatsiny no voafantina amin'ny faritra samihafa hosedraina, ary ny salan'isa antonony dia raisina ho sandan'ny hamafin'ilay santionany.
5. Ho an'ireo santionany misy endrika sarotra, ny pad misy endrika mifanentana aminy dia tokony horaisina sy hamboarina alohan'ny fitsapana. Ny santionan'ny boribory dia matetika no zahana amin'ny làlan'ny V.
6. Alohan'ny hametrahana azy dia zahao raha apetraka amin'ny toeran'ny famoahana ilay tahony fampidinana. Mandritra ny fandefasana azy, ny hetsika dia tokony ho maivana sy maharitra, tsy dia mafy. Aorian'ny famoahana dia tokony hapetraka amin'ny toeran'ny famoahana ny mpihazona entana mba hialana amin'ny fiovan'ny plastika izay mety hisy fiantraikany amin'ny refy fandrefesana noho ny fitaovana eo ambanin'ny entana fotoana ela.
Previous: Famakiana mivantana Brinell Hardness Tester HBS-3000
Manaraka: Digital Low Load Brinell HardnessTester HBS-62.5